Napoli oo qorsheyneysa in ay lasoo wareegto xiddiga Barcelona ee Gerard Deulofeu. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Napoli oo qorsheyneysa in ay lasoo wareegto xiddiga Barcelona ee Gerard Deulofeu.
Napoli oo qorsheyneysa in ay lasoo wareegto xiddiga Barcelona ee Gerard Deulofeu.
Posted by: radio himilo December 12, 2017
Muqdisho – Ciyaaryahanka Barcelona Garabka uga ciyaara ee Gerard Deulofeu ayaa lagu soo warramayaa in uu xiise ka helayo kooxda horyaalka Talyaaniga ka dhisan ee Napoli.
Intii lagu guda jiray xagaagi dhamaaday Deulofeu ayaa saxiixay labo sano oo heshiis ah si uu ugu soo laabto Camp Nou, laakiin Spanish-ka ayaa kaliya kusoo bilaawday Todobo kulan oo La Liga iyo Champions League ah.
Ousmane Dembele ayaa kasoo laaban doona dhaawac uu la dhibaatoonayey, marka la gaaro sanadka cusub. 23- jirkan ayaana la hubaa in fursadaha uu heli karo ay yihiin kuwo xaddidan, Napoli ayaana dooneysa in ay ka faaiideysato midda.
Sida laga soo xigtay Rai Sport, tababare Maurizio Sarri ayaa doonaya inuu xoojiyo ciyaartoydiisa bisha Janaayo, iyadoo Napoli ay tartan adag ugu jirto ku guuleysiga horyaalka Serie A, isla markaana ku tartameysa tartanka Europa League.
Deulofeu kuma cusba in uu ka ciyaaro horyaalka Italy, isagoo afar gool dhaliyay 17 kulan uu u saftay AC Milan intii lagu jiray qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore.
Previous: Kenya – Hey’ad Guur u sameysa dhalin-yarada Muslimiinta ah oo aan heysan qarash.
Next: Real Madrid oo u dhaqaaqeysa laacibka kooxda Liverpool ee Salah.